Izixhobo zovavanyo lweMingwang - Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co, Ltd.
I-Melt Flow Index yimilinganiselo yeegram zepolymer ezihamba ngaphezulu komhlaba.Ukusetyenziswa kwayo kuhlala kungumzi mveliso weplastikhi.Iindices zokuhamba kokunyibilika zihlala zidwelisiwe kwimakhishithi yedatha yezixhobo ze-thermoplastic. Isinyibilikisi sokunyibilika kwesinyithi sesona sixhobo sithandwayo kwishishini leplastiki ukumisela viscosities ezibonakalayo kwaye zihlala zisetyenziselwa ukuvavanya ukungqinelana kwebatch-to-batch.
Ikhabhoni emnyama (grafayithi) yenye yezona zinto zongezwayo zenziwe ngeplastikhi kungekuphela ngenxa yokuba ingumthombo otshiphu wombala omnyama kodwa nangenxa yokuba ibonelela ngeempawu ezintle zoomatshini kunye nokuchasana nemo yezulu. Ke ngoko, ukuvavanya inqanaba lomxholo wekhabhoni omnyama kubalulekile ukugcina ulawulo lweepropathi zeplastiki.
I-ASTM D1603 kunye ne-ISO 6964 iindlela ezikhoyo zokuvavanya umxholo wekhabhoni emnyama kwizinto ze-olefin kunye nemibhobho ye-PE, ngokwahlukeneyo.
Ngokuchanekileyo, iindlela zovavanyo zichaza ukumiselwa komxholo wekhabhoni omnyama kwi-polyethylene, i-polypropylene, kunye neplastiki ye-polybutylene. Isixhobo esisetyenzisiweyo sisithando somlilo kunye nephenyane lomlilo elibekwe ngaphakathi.
Ekuqaleni, umbandela uyatshiswa kwi-550 °C ukutshisa ipolymer ubunzima bayo oburekhodiweyo ngaphambi nasemva kwale nkqubo. Okokugqibela, intsalela ishushu ngama-900 °C ide itshe yonke into emnyama yekhabhoni, emva koko iyaphola kwaye ilinganiswe.
I-Dripper Flow Tester inokuvavanya naluphi na uhlobo lwesixhobo esikhuphayo kwi-tubing ye-drip kunye ne-drip tape kwi-dripers ye-on-line, i-sprinklers kunye ne-inline drippers ngaphandle kwepayipi.
Sebenzisa iiseli zomthwalo ukulinganisa amanzi aqokelelweyo kuvumela ukuchaneka okuphezulu kakhulu kwemilinganiselo yokuhamba ngexesha elifutshane. Sifezekisa oku ngokuvumela ukuya kuthi ga kwiisampulu ezili-10 ukuba zivavanywe ngaxeshanye kuxinzelelo olufanayo.
Uvavanyo lokuHamba yi-ISO 9260 kunye ne-ISO 9261 ehambelana nayo. Imigangatho yovavanyo esemgangathweni ukusuka kwi-12-25 kunye nezinye ziyafumaneka xa ziceliwe. Uvavanyo lucwangciswe ngokupheleleyo ukuya kuthi ga kumaxesha ovavanyo angama-30 ovavanyo. Uvavanyo ngalunye luvelisa ingxelo ebandakanya iigrafu kunye nohlalutyo lweenkcukacha manani ezinje nge-eksponenti kunye neCV.
Uvavanyo lwexabiso leCV kunye neCU
Uvavanyo lokumelana nemozulu